महिलाले कस्तो शैलीमा यौनसम्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिन्छन् ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
महिलाले कस्तो शैलीमा यौनसम्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिन्छन् ?
एजेन्सी । मानिसै पिच्छे फरक किसिमको यौन सम्पर्क शैली मन पर्न सक्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कुन मानिसले कस्तो शैलीको यौन आनन्द लिन्छ यो कुरा भन्न गाह्रो छ । तर, हालै एक सर्भेक्षणले रोचक कुरा बाहिर ल्याएको छ ।
६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् । जिउका रौँ तान्नु, नियन्त्रणमा लिनु, फोहोर बोल्नु तथा जिउमा टोक्नुजस्ता व्यवहार गरेर गरिने यौन सम्पर्कलाई महिलाहरुले सबैभन्दा रुचाएको अध्ययनले देखाएको छ ।